Mogadishu Journal » 2020 » November » 18
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa dhameestiray xubnaha dowladda federaalka uga mid noqonaya guddiyada doorashooyinka Qaranka.
Dowlada Soomaaliya oo War cad kasoo saartay dagaalka xoogan ee ka socda Dalka Itoobiya
Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeesay ka hadashay dagaalka xoogan ee ka socda dalka Itoobiya una dhaxeeya ciidamada dowlada Federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigrey. War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaarada Arimaha Dibadda Soomaaliya ayaa walaac xoogan...
Taliska Booliiska oo la wareegay Gaari ciidan oo ay isticmaali jireen Ilaalada Mahdi Guuleed
Sida aan ka ogaannay ilo wareedyo amni oo xog ogaal ah, taliska Booliiska Gobalka Banaadir gaar ahaan ciidamada la howl gala saldhigga Kaaraan ayaa gacanta ku dhigaan laga gaari oo kala ah Cabdibile iyo Qooqan oo qaad si dhuumeeleysi ah kusoo gelinayay magaalada Muqdisho....
Allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland ku geeriyooday Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib oo mudooyinkii lasoo dhaafay xanuunsanaa. Cumar Carte Qaalib ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo...
Popular Muslim prayer app says it is committed to protecting users’ privacy after Motherboard investigation causes uproar. 18 Nov 2020 A popular Islamic prayer and Quran app has dismissed a report that said it was selling the private data of its users to brokers who then handed...
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fowziya Abiikar Nuur ayaa ka qeybgashay Shir Goboleedka EMRO. Shirka oo ku qabsoomay habka Online-ka ama fogaan aragga loo yaqaano Zoom-ka ayaa waxaa ka qeyb ahaa hay’adaha WHO,UNICEF iyo...
Dowladda Soomaaliya oo dhaqaale siineysa qoysaski uu saameeyay Ayaxa”SAWIRRO”
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax oo socdaal ku jooga Puntland, ayaa booqday deegaannada uu saameynta ka geystay Ayaxa ee gobolka Nugaal. Wasiirka ayaa sidoo kale tagey goobo ay ka socotay diiwaangelinta...
Qarax iyo Rasaas xoogan oo laga maqlay Muqdisho iyo Faah faahino kasoo baxaya
Kolonyo gaadiid ah ay wateen ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM ayaa saakay qarax miino lagula eegtay halka loo yaqaan Masaajidka Turkiga oo kuyaala inta u dhaxeysa Isgooska Fagax iyo xaafada Jamhuuriya ee degmada Kaaraan. Jugta qaraxa ayaana laga maqlay...
Horjoogeyaal ka tirsan Al-shabaab oo lagu daray liiska argagixisada
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in Cabdullaahi Cismaan Maxamed iyo Macallin Ayman ay yihiin hoggaamiyeyaasha sarsare ee Al-Shabaab oo fadhigoodu yahay Soomaaliya. Cabdullaahi Cismaan Maxamed, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Kooxda Al-Shabaab oo...
Gobolka Banaadir oo dayactiraya xarunta dhul bixinta dowladda hoose ee Xamar+SAWIRRO
Maamulka gobolka Banaadir ayaa billaabay dayactirka xarunta gaadiidka iyo dhul bixinta dowladda hoose ee Xamar oo burbur xooggan uu soo gaaray. Xaruntaan oo muhiim u ah adeegyada gaadiidka iyo dhul bixinta ayaa waxaa dayactirkeeda horkacaya agaasime ku xigeenka waaxda howlaha...